ACDSee Pro, yemahara kwenguva shoma (6,99 euros) | IPhone nhau
ACDSee Pro, yemahara kwenguva shoma (6,99 euros)
ACDSee Pro ndeimwe yeakanakisa maficha atinogona kuwana muApp Store zvese kutora mifananidzo nekuzvigadzirisa gare gare. Uye ini handisi kuzvitaura, asi isu tinongofanirwa kuona kuti ACDSee Pro ine sei avhareji mamakisi e4,5 nyeredzi kubva pa5 inogoneka. Kutenda kune ichi kunyorera, icho chine mutengo wenguva dzose we6,99 euros muApp Store uye izvo kwenguva shoma inowanikwa kuti utore mahara, isu tinokwanisa kutora uye kugadzirisa edu mafoto mukuwedzera mukugadzira inonakidza makolji kuti unakirwe naka kunakidzwa kwekutora mifananidzo pane yedu iPhone.
Kana isu tikataura nezve chikamu chekamera, isu tine akati wandei ekupfura modhi zvichienderana nemamiriro ezvinhu atinozviwana tiri, kusanganisira manongedzo ekudzora kugadzirisa kutarisisa, kufumura, chena chiyero, shutter kumhanya ... kusanganisira akasiyana emamodhi modhi, kusanganisira iyo yekuzadza. Ichi chishandiso chinotipawo nhanho kuti mifananidzo yedu yese ibude yakatwasuka. Mafirita aigona kushaikwa mune ino foto mupepeti zvakare, mafirita anotibvumidza isu kuti titore kuti ndechipi chakakosha chinhu mukutora mifananidzo, iro basa hombe remasefa, kunyangwe kweimwe nguva kuve chikamu chakamonyorwa nekushandisa kwerudzi urwu.
ACDSee Pro ndeye chine simba pikicha izvo zvinotibvumidza isu kugadzirisa mwenje mwenje, mimvuri, musiyano, kuratidzwa, chena chiyero, kuzadza, kupinza ... Asi isu tinogona zvakare kuwedzera akasiyana mhedzisiro kugadzira ako mapikicha, kuabvarura, kuatwasanudza ... zvese izvi neakareruka kutonga.
Kune vanoda collages, ACDSee Pro inotipa huwandu hukuru hweanogona nziyo dzekugovana ndangariro dzedu mune mumwe mufananidzo. Tinogona kukurumidza kusarudza iwo mafoto atinoda kusanganisa mumufananidzo mumwe kuitira kuti iko kunyorera tipe 100 magadzirirwo akasiyana, inogoverwa mumatanho akatwasuka kana akatwasuka.
ACDSee Pro inoda hushoma hwe9.3, inowirirana neiyo iPhone, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » ACDSee Pro, yemahara kwenguva shoma (6,99 euros)
Yakanaka kwazvo app!
Kutenda yambiro !!!
Vakandibhadharisa € 1,98.
Pindura kuna Mikelo
Natsiridza kubatana kweApple Watch ne iPhone yako nekutenda kuWiFi
Nintendo yakagadzira nezve 2,9 mamirioni muzuva rimwe neMoto Emblem